Ny tantaran'ny Alisson Becker momba ny tantaram-pahaterahana malaza dia mbola tsy nambara tamin'ny tantaram-piainany
Home AMERIKANINA STARS Ny tantaran'ny Alisson Becker momba ny tantaram-pahaterahana malaza dia mbola tsy nambara tamin'ny tantaram-piainany
Ny LB dia manolotra tantara iray amin'ny Breziliana malaza amin'ny anaram-bosotra "Ny Messi avy amin'ny mpiambina". Ny Alisson Becker tantaran-tantaran'olon-tsy fantatra momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-nitranga voamarikao hatramin'ny taonan'ny fahazazany. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny laza, fianakaviana background, ny fiainam-pifandraisana ary ny zavatra hafa momba ny OFF-Pitch (kely fantany) momba azy.
Eny, samy mahafantatra fa Mpitandro ny Breziliana miaraka amin'ny kilasy izy. Na izany aza, vitsy ihany no mandinika ny Bio Bio Alison izay mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Alisson Becker Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Voalohandohan'ny fiainana
Alisson Ramses Becker dia teraka tamin'ny 2nd ny andro 1992 tamin'ny XNUMX tamin'ny reniny, Magali Lino de Souza Becker sy ny rainy, José Agostinho Becker (mpividy tranombarotra) ao amin'ny fanjakan'i Rio Grande do Sul, Brezila.
Nolazain'ny ray aman-drenin'i Alisson Becker lavitra Ao amin'ny sary etsy ambany, dia nanangana fianakaviana manana ny maha-izy azy miaraka amin'ny mpikambana rehetra izay manomboka manetry tena.
Miaraka amin'ny zokiny Muriel, Alisson sy ny mpikambana iray manontolo ao amin'ny fianakaviany Teraka tany Cany finoana kristianina.
Ahoana no nahatonga ny baomba?: Nahafantatra ny maha-zava-dehibe ny baolina kitra any Brezila, ny ray aman-drenin'i Alisson Becker dia liana tamin'ny fahazoana ny ankizilahy tafiditra amin'ny lalao. Ny Alisson sy ny zokiny lahy, Muriel Gustavo izay enin-taona latsaka dia misafidy ny ho lasa mpiandry tsatokazo vao maraina.
Alisson Becker Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Ny fifaninanana Rahalahy
Ho an'ny ray aman-drenin'i Alisson Becker, ny Academy of Club Sport Breziliana International no toerana tsara indrindra ho an'ireo ankizilahy roa ireo hanomboka ny asany. Muriel (sary etsy ambany) izay 6 taona lasa dia namarana ny dingana farany tamin'ny asa tanorany izay niasa tamin'ny 2003 ka hatramin'ny 2006.
Alisson dia tonga teo amin'ny 5 taona taty aoriana, tamin'ny taona 2008. Ireo ray aman-dreny roa ireo dia tsy mitsahatra tsy mitsahatra ny miresaka momba ny fahatsapana fitarihana ho an'ny zanany. Izany dia nitranga tamin'ny fotoana nanombohan'ny Allison izay nahazo diplaoma avy amin'ny klioban'ny klioban'ny zokiny miaraka amin'ny zokiny lahy noho ny anjara andraikitra manan-danja indrindra. Dona Magali Lino de Souza Becker, renim-pianakaviana tamin'ny adiresy vao haingana, no niaiky fa sarotra ny mahita ny zanany roa mifaninana amin'ny toerana misy ny laharana voalohany. Ao amin'ny teniny;
Tena sarotra izany. Tianao hojerena ve ny roa amin'izy ireo? Ary ahoana no ahafahana manao izany? Manontany i Magali.
Alisson Becker Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Mianjera ny Loholona
Anisan'ireo rahalahy i Becker, izay nanana fanapahan-kevitra mafimafy kokoa mba hahatanteraka ny nofinofiny. Nahazo ny fifaninanana izy ho an'ny toerana voalohany taorian'ny nandraisan'ny rahalahiny ny ratra nahazo azy nandritra ny fotoana kelikely. Rehefa tafaverina tamin'i Muriel ny ratra, dia nahazo fitsangatsanganana i Alisson ka nanjary tsy azo ialana. Izany dia nitondra an'i Muriel naka ny safidy fampindramana tao amin'ny 2009 taorian'ny ady tamin'ity taona ity niaraka tamin'ny zandriny lahy.
Hitan'i José Agostinho Becker ny fahitana ny zanak'izy ireo hifaninana ary farany dia ny zavatra na Magali na ny vadiny dia tsy afaka milaza mialoha ny momba ny fifandraisan'ny zanany. Na izany aza dia nisy ny fanohanana goavana ho an'ireo izay nifankatia taty aoriana.
Vao herinandro vitsy taorian'ny nandaozany ny fampindramam-bolany, nanokatra ny media sosialy i Muriel;
Fantatro ny fahatsapany fa very ny toerako. Faly anefa aho fa ny zandriko lahy no nitondra izany tamiko.
Ny Alisson Becker Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Miatrika an'i Dida
Rehefa nandeha ny fotoana, dia nanjary tsy filalaovana fanalefahana ny fikasan'i Alisson mba hahatsikaritra azy ireo, saingy azo tanterahina amin'ny asa mafy. Fantany fa ny fikajiana ny tanjona dia ny fivarotana Eoropeana amin'ny fividianana lozam-pifamoivoizana kokoa. Na dia teo aza ny eritreritra dia nanome ny tsara indrindra i Alisson.
Io no taona 2012 rehefa nampiofana ny klioba niaraka tamin'ny totohondry i Dunga ary nisy izany fisalasalàna matotra momba ny mpilalao sy ny mpilalao baolina mitazona ny toerany noho ny fifaninanana mafy.
Nihalehibe i Alisson Becker rehefa nanohitra ny nitifitra ny baolina kitra Brazianina taloha Dida izay tonga tao amin'ny klioban-dry zareo mba hifaninana taminy saingy tratry ny fahatairana nahita tanora Alisson Becker nanery ny fisotroan-dronono feno tamin'ny baolina tamin'ny taona 2015.
Ny Alisson Becker Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Rising to Fame
Taorian'ny fanerena Dida Niditra ny fisotroan-dronono i Alisson, ary nanomboka nalaza be dia be izy ary nanaraka ny tombontsoa maro avy amin'ny Scouts Eoropeana. Ny fahaiza-manaony ny lazany dia nifanaraka mivantana tamin'ny fahafahany nanatsara ny plon-dranomandry, ka nitazona ny baolina rehetra avy teo amin'ny harato.
Ny Roma eo an-toerana Italiana no nahazo ny hazakazaka farany tamin'ny fifaninanana Alisson Becker. Raha tany Rôma, nitatitra i Alisson fa somary kivy noho ny tsy fahatanterany ny lalao raha nilalao horonan-tsarimihetsika faharoa tany Wojciech Szczesny izy.
Nifantoka tamin'ny traikefa niainany taloha i Alisson dia tsy maintsy niala tamin'ny làlana hanalany an'i Szczesny izay niala tamin'ny toerana niaviany ary voatery nandao ny klioba ho an'i Juventus izay nilaina ny fanoloana backup ho an'ny efa antitra Gianluigi Buffon.
taorian'ny Loris Karius ny Liverpool dia nanana lozabe ratsy 2017 / 2018 Champions League final, Liverpool dia nanomboka ny fikarohan'izy ireo ny lozisialy vaovao. I Alisson Becker no hany olona nilaina mba hanoloana ny mpilalao baolina kitra ao amin'ny klioba.
Tamin'ny 19 Jolay 2018, tamin'ny taona 25, dia nanamarina tamin'ny fomba ofisialy fa mpiambina ny lalao Liverpool i Alisson Becker.
Tamin'ny taona 25 izay naneho ny tanany, i Alisson no lasibatry ny lafo vidy indrindra tamin'ny fotoana rehetra, nihoatra ny famindrana Ederson Moraes (Ny mpitana an-dalan'ny lafo indrindra no nandoavana ny sandam-bola) ary Gianluigi Buffon (ny fandoavam-bola naloany tao Euro). Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Alisson Becker Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Relationship Life
Ao ambadik'ireo mpilalao baolina kitra Breziliana, misy vehivavy tsara, noho izany dia mandeha ny resaka. Anatin'ity toe-javatra ity, tao ambadiky ny fahombiazan'i Alisson Becker, dia nisy sipa iray mahafinaritra nantsoina hoe Natalia Loewe (sary etsy ambany) izay lasa vadiny tatỳ aoriana.
Raha tsy misy isalasalana, ny fomba fiainan'i Alisson Becker manoloana ny kianja dia manangana sary iray manontolo momba azy. Araka ny loharanom-baovao, i Alisson dia nahalala ny vadiny Natalia Loewe hatramin'ny zandriny nandritra ny sekoly ambaratonga faharoa. Raha nanohy nifantoka tamin'ny baolina kitra i Alisson, dia nahita ny tenany tamin'ny alàlan'ny fianarana i Natalia mba ho mpitsabo fitsaboana araka ny porofo maneho etsy ambany.
Araka ny loharanom-baovao, dia nanomboka nampiaraka tamin'ny 2012 ireo mpankafy, ny taona Alisson dia namarana ny asany tamin'ny Internacional. Voamarina izany rehefa nizara lahatsoratra Instagram (Jereo eto ambany) i Becker indray mandeha amin'ny 9th of September, 2016 miaraka amin'ny fanoratana dikanteny;
"Arahabaina anay, ny fitiavako !! Ny sary dia miresaka ho azy, fa tiako ny hilaza aminao fa tena tiako ianao, ary tena faly amin'ny lafiny anao aho !! Taona 4. "
Jereo eto ambany;
Ny sary etsy ambony dia notifirina herintaona taorian'ireo samy nanao ny fampakaram-bady manokana izay niseho tao amin'ny 2015. Samy manana zazavavy kely antsoina hoe Helena teraka tao 2016 ireo mpivady ireo.
Efa nanaporofo i Alisson, fotoana tsy hita isa ny maha-vady sy ray mahafinaritra azy. Ankoatra ny toerana misy azy ho an'ny vady malalany fony izy nitera-bavy, fantatra ihany koa fa mpiara-miombon'antoka Breziliana no tena tia ny Helena madinika.
Helena zanany vavy dia fitaomam-panahy lehibe ho an'i Becker izay nampiasaina hamoahana sary malaza momba azy. Ity ambany ity dia iray amin'ireo no mampiseho azy ny hanipy azy amin'ny rivotra.
Ny fetin'ny fitsingerenan'ny andro dia fotoana manokana izay mitaky fankalazana ho an'ny fianakavian'i Becker. Ity ambany ity ny sarin'ilay ray be fitiavana nankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i Helena.
Ho an'i Alison, ny zava-drehetra momba ny fampisehoana nataony ary ny fampisehoana ho an'ireo mpankafy ny fandreseny manokana.
Alisson Becker Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Tatitra manokana
Hitan'i Jesosy Kristy:
Raha vantany vao nahita ny endriny ambony ianao, dia tsy azonao ambara izany. Ny sarin'i Alisson Becker etsy ambony dia toa mitovy amin'i Jesoa Kristy.
Momba ny alika tiany:
Ankoatra ny vadiny sy ny zanany, Alisson alika Izy no hany zavatra eto ambonin'ny tany izay tia azy mihoatra noho ny fitiavany ny tenany.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Alison Becker momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Tantara momba ny fahazazan-jaza i Gabriel Barbosa miampy Untold Biography Facts
Lorenzo Pellegrini Tantara momba ny fahazazana miampy Untold Biography Facts
Tantara Brendan Rodger Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Gabriel Martinelli Tantara Fahazazan-jaza sy Untold Biography Facts
Lucas Digne Tantara Ankizy Miampy Tambabe Biography Facts
Nandeha tantara momba ny fahazazana sy zava-misy tsy fantatra i Rodrygo
Everton Soares tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
David Neres tantaram-piainana momba ny tantaram-pahaterahana ao amin'ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana
Joel Matip Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Nicolo Zaniolo tantaran'ny tantaram-pahaterahana ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Trent Alexander-Arnold tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa
Febroary 12, 2018
Michael Owen tantaram-pitiavana momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Desambra 27, 2017
Janoary 16, 2020
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Enga anie 14, 2017
Ny tantaram-pitiavan'i Willian Childhood Plus Untold
Novambra 10, 2017
Janoary 28, 2018